Ciidamada Booliska oo gacanta ku soo dhigay kooxo Muqdisho ku daadiyay waraaqo digniin ah
Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku dhigay kooxo qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ku daadiyay waraaqo digniin oo ay ku qorneyd calaamadaha Al-Shabaab, kaasoo dhalinyarada iyo waalidiinta looga digayo inay tagaan xarumaha dowladda ama inay ku biiraan ciidamada.
Saddex ruux oo mid ka mid ah uu ahaa nin aad looga yaqaano magaalada Muqdisho ayay ciidamada gacanta ku soo dhigeen, waxaana lala soo qabtay qalabkii lagu daabacayay warqaaha oo ah Printer iyo Computero.
Ciidamada Amaanka oo saaka fashiliyey Qarax Miino
Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa saaka waxaa ay fashiliyeen Qarax miino oo ay maleeshiyaadka Al shabaab ku aaseen wadada Siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho.
Qaraxaan oo ahaa minada dhulka lagu aaso ayaa Ciidamadu ku guulaysteen inay ka saaraan wadada ka dib markii dadka deegaanku ay kusoo wargaliyeen iyadoo aan wax khasaaro ah gaysan.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Gobalka Hiiraan ayaa sheegay in uu isku soo dhiibay nin ay ku sheegeyn in uu ka tirsanaa Taliyaasha Sare ee Dagaalyahanada Ururka Al Shabaab.